Forus adds voice on SA violence - NewsDay Zimbabwe
Home Local News Forus adds voice on SA violence
Freedom Of Rights Under Sovereign Manyara Munyenziwa
ONE of Zimbabwe’s dozens of minute opposition parties, the Freedom Of Rights Under Sovereign (Forus), has added its voice to the chorus of criticism on the xenophobic violence in South Africa.
Forus president Manyara Munyenziwa expressed concern about the tension between South Africans and Zimbabweans going unchecked.
“Unfortunately, the skewed performance of the economies of both countries, one seemingly doing better than the other, has prompted massive migration of documented and undocumented Zimbabweans into South Africa itself a melting pot of racial inequalities, a legacy of the iniquitous apartheid ideology and governments before independence in 1994.”
Perennially millions of Zimbabweans living in South Africa as economic or political refugees have been the target of xenophobic attacks that started in 2009 with South Africans accusing them of grabbing their jobs.
Munyenziwa added: “South Africa should be proud of itself in being seen by Africans as the last bastion of freedom and civil liberties, hence it should stop all emerging Afrophobia and xenophobia behaviour in its citizens.”
Freedom Of Rights Under Sovereign
Previous articleUnderstand your life goals
Next articleTop ZNA chef leaves service empty-handed